Wax kasta oo inta badan haweenku ku soo jiitaan ninka, sida loo dhaqmo | Ragga Stylish
Waa maxay dumarku maxay ugu jecelyihiin ragga?Maxay tahay waxa ugu soo jiidashada badan? Su'aashan waxaa soo bandhigay taariikhda oo dhan rag badan oo keli ah oo u arkaayay sida kuwa kale ugu guuleysteen, waxayna ahaayeen kuwo liita.
Laakiin daraasado cusub ayaa soo ogaanaya waxyaabo yaab leh. Falanqaynta waxa ugu badan ee haweenku u soo jiitaan nin, waxaan arki karnaa inay soo jiitaan ragga quruxda badan, laakiin taasi doorbido lammaane naxariis badan, deeqsi iyo deeqsinimo leh, xiriir jaceyl.
Natiijooyinka dhammaan daraasaddan ayaa na siinaya caddeyn cusub oo ku saabsan muhiimadda altruism doorbidista marka aad dooranaysid lammaane.
Waxa ugu badan ee dumarka u soo jiita ragga
Su dabeecad dhab ah, shakhsiyaddaada qeexan. Raggaas oo aan iska yeel yeelin, laakiin isu muujiya sida ay yihiin, kuwa ugu badan ee haweenka gaadha, oo guuleysan kara qalbiyadooda.
Ragga leh habdhaqan wanaagsan. Dadka yididiilada leh, ee ku leh jawiga wanaagsan wax kasta oo ay eegaan, had iyo jeer waxay leeyihiin rafcaan weyn. Yididiilada, iyo sidoo kale isku dhufashada xoogga badan, waa la is qaadsiiyaa.
La awood dhegeysi. Ninka runti yaqaana sida loo dhagaysto haweeneyda ayaa leh fursado badan oo uu kuqabsan karo jacaylkeeda. Dhageysi ma ahan in la sasabto, haweeneydu si fudud ayey u ogaan doontaa. Waxay ku saabsan tahay isdhaafsiga waxyaalaha, wax ku biirinta, samir u yeelashada dhageysiga iyo damqashada.
Iftiinka ragga sidoo kale wuu sasabtaa. Laakiin looma fasirin awood, lacag ama miisaan bulsho, laakiin waa iftiin u gaar ah. Qofka ku faraxsan noloshiisa, isku dheelitiran iyo iswaafaqsan ayaa dhaliya dhalaalkaas. Ragga noocan ahi waxay leeyihiin wax kasta oo sasabasho u socda.
Kaftanka wanaagsan waa lama huraan. Maaha cayda joogtada ah ama kaftanka fudud, laakiin joie de vivre iyo awoodda lagu soo bandhigo kaftan wanaagsan.
Ilaha sawirka: Belelú / ku saabsan galmada - blogger
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxay tahay waxa ugu badan ee haweenku u soo jiitaan nin?
Cambaha ayaa soo bandhigaya ku habboon guga / xagaaga 2017
Afar siyaabood oo casri ah oo loo xidho baarkinka miisaanka culus